‘व्यापार नाफा मात्र होइन, नागरिक प्रतिको दायित्व पनि हो’— शैबल घोष
| 2017-03-02 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं|| फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको माध्यमबाट जोन्सन एन्ड निकोल्सनको नामबाट नेपालमा आएको बर्जर पेन्ट एक प्रसिद्ध पेन्ट हो ।
पछिल्लो पटक नेपाली बजारका पेन्टमा अत्यधिक मात्रामा लिड मिसिएको कुरा चर्काे आलोचनाको विषय पनि बनेको छ । लिडयुक्त पेन्टले मानिसको स्वाथ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्छ भन्ने सायद धेरै कमैलाई थाहा होला ।
यसबारे उत्पादकदेखि बिक्रेता र उपभोक्तासम्म सचेत र जवाफदेही हुनै पर्छ । नेपाली बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, गुणस्तरहीन पेन्ट उत्पादन गरी ‘मुनाफा’ मात्र कमाउने धेय भएका अरु पेन्ट भन्दा फरक पेन्ट रहेको दाबी गर्छन् बर्जर पेन्टका कन्ट्री मेनेजर शैबल घोष ।
उनी बर्जर पेन्ट ‘जनस्वास्थ्य मैत्री’ रहेको दाबी गर्छन् । हुन पनि केही समय अघि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले राजधानीका केही पेन्टहरुमा गरेको परीक्षणले जस्मिन र रिलायन्स पेन्टमा समेत अत्यधिक लिड रहेको तर बर्जर पेन्टमा भने आवश्यक मात्रा भन्दा पनि कम’ रहेको पुष्टि भएको थियो ।
यसले उपभोक्ताबाट अनावश्यक ‘मुनाफा’ कमाउने अन्य सस्ता पेन्ट भन्दा फरक र उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार रहेको देखाउँछ बर्जर पेन्टलाई ।
तर नेपाल सानो बजार हो, विदेशबाट आयातीत पेन्टले नेपाली गुणस्तरीय उत्पादनलाई टिक्न गाह्रो हुने गरेको नेपाली व्यवसायीको गुनासो राज्यले सुनेको देखिदैन । नेपाली बजारमा गुणस्तर सहित उपभोक्ता स्वास्थ्य मैत्री बर्जर पेन्टबारे कन्ट्री मेनेजर घोषसँग निर्माण सञ्चारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप–
नियम कानुन समय अनुसार परिवर्तन भएनन्
कम्पनी सुरुवातको चरणदेखि हालसम्म आइपुग्दा हामीले एउटै ऐन नियमलाई फलो गर्दै आएका छौं । हामीले सरकारलाई सेन्ट्रल वेलफेयरका लागि भनेर आम्दानीको ३० प्रतिशत तिर्ने गरेका छौं ।
हामीले तिरेको त्यो ३० प्रतिशत सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ त्यसका बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । हामी मल्टी नेस्नल कम्पनीले सरकारलाई आफ्नो मुनाफाको कानुनी दायरा अन्तर्गत रहेर कर तिरी रहेका छौं ।
यही वातावरणमा काम गर्ने मल्टी नेस्नल कम्पनीले सरकारलाई पारदर्शी ढंगले मुनाफा कर तिर्दछ भने नेपालमा रहेका कमै मात्र कम्पनीले सरकारलाई कर तिरेको सुन्नमा आउँछ ? के नेपालका कम्पनीले नाफा कमाउन नै नसकेका हुन् त ?
बर्जरको मार्केट करिब ३१ प्रतिशत नेपाली बजारमा बर्जर पेन्ट एकदमै रुचाइएको ब्राण्ड हो । हामीले क्वान्टीटिलाई भन्दा पनि क्वालिटीलाई जोड दिँदै आएका छौं त्यसैले त हामी नेपाली बजारमा स्थापित छौं । त्यति हँुदा हुँदै पनि हामीले बजारको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छौं । Business doesn't mean profit , mass social responsibilities.
हामीले नाफालाई मात्र भन्दा पनि आम जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि ध्यान दिँदै व्यापार गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र दिगो व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ ।
मानव स्वास्थ्य अनुकुल यो एक इनोभेटिभ ब्राण्ड
हामीले वातावरण मैत्री ग्रीन पेन्टलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका र त्यही मापदण्ड अनुसारका पेन्ट हुन जरुरी छ ।
अहिले नेपाली पेन्ट जगत्मा लिडको मात्रा अधिक भएका पेन्ट पनि छन् तर उपभोक्ताले कुन पेन्ट किन्दा स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्न जरुरी छ ।
नेपालकै सरकारी निकायमा नै पनि पेन्टमा हुने भोलाटाइल अग्र्यानिक कम्पाउण्डको मात्रा कति हुँदा मानव स्वास्थ्य अनुकुल हुन्छ भनेर चेकजाँच गर्ने कुनै विभाग छैन । इण्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पेन्टमा भीओसीको मात्रा ५० यूनिटभन्दा कम हुनुपर्छ ।
हामीले प्रयोग गर्ने गरेको साधारण पेन्टमा भने भीओसीको मात्रा १२० देखि १८५ युनिटसम्म पाइन्छ । तर ग्रीन पेन्टमा भीओसीको मात्रा २५ प्रतिशत भन्दा पनि कम हुने हुँदा यो मानव स्वास्थ्य अनुकुल हुन्छ ।
त्यस्तै बर्जरले Silk Breath Easy Paint सरकारले यस्तो मापदण्ड छिटै ल्याइदिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आउन व्यवसायीलाई पनि सहज हुने घोष बताउँछन् । यसमा लिड फ्रि हुनु पूर्व सर्त नै हो ।
बर्जरको उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम
बर्जरले अहिले बजारमा तीन तरीकाले आम नागरिकमा पेन्टको बारेमा जानकारी दिने स्किम ल्याएको छ । पहिलो त बर्जरले उसकै च्यानेल पार्टनरको माध्यमबाट जनतालाई पेन्टको बारेमा जानकारी दिँदै आएको छ ।
त्यस्तै पेन्ट सप तथा पेन्टरका माध्यमबाट बर्जर पेन्टको बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी दिँदै आएको छ भने तेस्रो उपभोक्ता स्वयंलाई प्रत्यक्ष रुपमा परामर्श दिँदै आएको छ ।
उपभोक्ताले अल्पकालीन फायदालाई हेरेर भन्दा पनि दीर्घकालीन फायदालाई हेरेर घरमा कस्तो पेन्ट लगाउने भन्ने कुराको निर्णय लिन सुझाव दिन्छन् घोष ।
समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै टोल फ्रि न १६६००१२३४३४ को माध्यमबाट पनि तपाईंले बर्जर पेन्टको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।
त्यस्तै पेन्टरका लागि दुर्घटना बिमा, मेडिकल बिमा र सेफ्टी बेल्टको व्यवस्था पनि गर्दै आएका छौं । समय समयमा पेन्टरलाई विभिन्न किसिमका वर्कसपमा पनि सहमाभी गराउँदै आएका छौं ।
गुणस्तरमा सचेत बन्दै नेपाली
नेपाली गुणस्तरमा सचेत नेपालीहरु कुनै पनि सामानको गुणस्तरमा सचेत बन्दै गएका छन् । आफूले खर्च गरेको पैसाले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक असर पार्छ भन्ने जानकारी पाएमा नेपाली गुणस्तरीय सामानका लागि खर्च गर्न तयार छन् ।
घरमा पेन्ट गर्नु भनेको केही दशक अघिसम्म घरलाई सुन्दर देखाउनका लागि भन्ने थियो भने अहिले घरको सुन्दरता र संरक्षणका लागि पेन्ट गरिन्छ जसमा मानव सुरक्षालाई समेत जोडेर हेर्न थालिएको छ ।
त्यसैले घरमा पेन्ट लगाउँदै हुनुहुन्छ अथवा नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एक पल्ट पेन्टका बारेमा तपाईंले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ किनकि यसमा तपाईंको स्वास्थ्य पनि जोडिएको छ ।
बिहीबार, १९ फागुन, ०७३